galmudugnews.com » ilmeynta bani’aadamka waa 10 nooc, se adigu tee baad ilmaysaa?(Warbixin)‏
Home » QORMOOYIN, WARARKA » ilmeynta bani’aadamka waa 10 nooc, se adigu tee baad ilmaysaa?(Warbixin)‏ ilmeynta bani’aadamka waa 10 nooc, se adigu tee baad ilmaysaa?(Warbixin)‏ galmudug on
No Comment Views 16572Ilintu waxa aay ka jawaabtaa dareenkeena Qofka Beni aadamka ahi. Waxa ayna ku xiran tahay hadba xaalada kula soo gudboonaata ee aad ku jirto. Ilintu waxa ay ka mid tahay mid ama qeeb ka tahay qalabka uu jirkeenu leeyahay oo aan isticmaalo sida in lagu caawiyo.
Hadaba ilintu waa 10 nooc, waxa ayna kala yihiin sidaan ee ka bogasho wacan :
1 – ilinta weyn : waa u ilmeynta guusha dagaalka .
2 – ilinta qof aan waxba galabsan: waa ilinta ka timaada caruurta kolka ay ooyayaan.
3 – ilinta Saameynta leh : waa ilinta Towbada.
4 – ilinta dabacsan : waa ilinta Haweenka .
5 – linta quruxda badan : waa u ilmeynta xilliga balanta labada qof ay ka wada dhabeeyaan.
6 – ilinta murugada leh : waa ilinta xilliga Tacziyada.
7 – ilinta Barwaaqada : waa u ilmeynta guusha ujeedada leh ee Jaceylka iyo waxbarashada.
8 – ilinta aan la dhayalsan karin : waa u ilmeynta xanuunka iyo ciqaabta .
9 – ilinta waqtiyeysan: waa ilinta shalaaytada iyo qoomamada.
10 – linta khayaanada : waa ilinta yaxaaska .
Waxaa filaaya in aad wax badan oo daah kaa saarna aad ka baratay kana garatay ilamaha inta aay u kala baxaan sidaan u soo xusnay.
Intaas ayaa tusaalo kaaga filan ilinta beni aadamka ilmeeyo iyo nuucyada aay u kala baxdo oo aan filayo in aad wax baratay kaga fa,idaysatay.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21005 hitsContact US - 19637 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15708 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 14797 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13907 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13853 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13811 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13084 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11764 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11711 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11703 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11511 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11502 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11341 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11166 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11089 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11045 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11020 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10656 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10334 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10133 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10025 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 9993 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9860 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9770 hits Home About